Izinkampani eziphendukela kuma-Internal Social Networks | Martech Zone
Izinkampani eziphendukela kumaNethiwekhi Omphakathi Wangaphakathi
NgoLwesithathu, Juni 18, 2008 NgeSonto, Agasti 23, 2009 Douglas Karr
Kunethoni lemininingwane mayelana nawo wonke ama-Social Networks akwiwebhu, kepha inhlangano ibilokhu yenzekile ukuletha ezinye izinzuzo zokuxhumana nabantu kwi-Intranet. Ngenze ucwaningo ngesihloko sesigamu sezinsuku zokuxhumana nabantu engikhulume ngaso ne- IABC izolo futhi okutholakele bekufanele ukubhekisisa. Bekufanele ngimbe ngijule ukuthola imininingwane nezithombe-skrini, kepha kukhona okumbalwa izinsiza laphaya ezikhomba i-Intranet.
I-Intranet yafa kakhulu futhi yafa ezinkampanini eziningi ngaphambi kobuchwepheshe beWeb 2.0. Kuyishwa, ngoba izinkampani eziningi zibheyili ngomqondo wokuthi zingaphinde zibuyele kuwo uma sehluleka. Ama-Intranet okuqala ayengelutho ngaphandle kwabakhi bamakhasi e-web asetshenziswayo umnyango ngamunye owawusebenzisa ukuthumela izindaba nolwazi, ngaphandle kwezinsizakusebenza noma i-automation. IMicrosoft yethule i-Sharepoint, kepha umzamo odingekayo wokuzenzekelayo nokugcina okuqukethwe ubusengaphezu kwezinga lamakhono lomsebenzi ojwayelekile.
Lapho kufika khona Izinhlelo zokusebenza ze-Google, Social Networks, Wikis, Windows Sharepoint Services 3.0 namanye amathuluzi okusebenzisana nawokuxhumana, sekuyisikhathi sokuthi i-Intranet ibuye.
Amacala Ebhizinisi Enethiwekhi Yomphakathi Yangaphakathi
Ukuqapha kanye Namasu Okubambisana KweDrayivu - ukuqinisekisa ukuthi abasebenzi, amaqembu namaphrojekthi ahambelana nombono webhizinisi.
Ubukhosi obuphezulu beNkampani yeFlatten - Inikeza indlela eqonde ngqo esuka ku-CEO iye kwisisebenzi esiphansi kakhulu futhi okuphambene nalokho. Lokhu kuholela ekuthuthukisweni kwezokuxhumana, ukwenza izinto obala, ukwethembana kanye ukunika amandla yabasebenzi.
Thuthukisa Ukuxhumana Kwangaphakathi - ukunikeza abasebenzi indlela yokuthola abanye abasebenzi abanezintshisekelo ezifanayo ngaphakathi nangaphandle kwenkampani - ezemidlalo, amasonto, izinto zokuzilibazisa, njll. Ukuba nabasebenzi abaxhumene kakhulu kuholela ekwanelisekeni nasekugcinweni kwabasebenzi.
Imibono - I-Idea Generation - Amathuluzi wokukhiqiza imibono ajwayelekile kuwo wonke ama-intranethi ezinkampani ezinkulu. Amathuluzi afana ne-Digg wokukhuthaza imibono yemali yangempela neminye imiklomelo ajwayelekile.
Izindaba kanye Nolwazi - Yabelana ngezindaba zenkampani nezabasebenzi nezokukhishwa kwabezindaba.
Resources - hlinzeka ngemitapo yolwazi, okokufundisa, okokuthengisa, imibhalo yemikhiqizo, usizo, amasu, izinhloso, isabelomali, njll.
Ukwabelana ngolwazi nokusebenzisana - hlinzeka ngama-wikis nezinhlelo zokusebenza ezabiwe ukwandisa isivinini sezidingo zephrojekthi, imibhalo, njll.
I-Workforc esekwe kuphrojekthie - ukuhlinzeka ngezindlela abasebenzi zokuzihlela ngaphandle kwendawo ebonakalayo, izinga lamakhono, umnyango, njll. Amandla okusesha nokuthola abasebenzi abalulekile asuse uchungechunge lomyalo kule nqubo, avumela amaqembu abonakalayo ukuthi ahlele futhi asebenze ngokushesha.
Ekubuyekezeni inetha, bekukhona 'ukunambitheka' okuningana kokuthi izinkampani zisebenzisa kanjani amanethiwekhi nge-intranet yazo - futhi nezimpawu zezinkampani namathuluzi azo ziyatshela. Ngicela ungivumele ngithole engikutholile lapha - ngoba anginakho ukufinyelela okuqondile kuGoogle, Microsoft, Yahoo kanye ne-IBM, ngisebenza ngama-athikili nezithombe-skrini ezingaba namasonto… noma iminyaka ubudala!
I-Google's Moma ayiyona injini elula yokusesha, iMoma futhi ivumela ukuthi izinsiza zabantu zikhonjiswe futhi zikhonjwe kanye nezimpahla zedijithali. Ukusuka kwamanye amasayithi engiwafundile, iGoogle inesistimu yokubuyekeza ikhodi esekwe ngokulinganayo, ebizwa Mondrian.
Yahoo! Ngemuva kwendlu
Yahoo! Ngemuva kwendlu kubonakala kukhombisa ngokugqamile isitatimende sabo semishini kanye nokuhlela izinto ezisekela leso sitatimende ukuze abasebenzi babo bazifunde. Ngimangele ukuthi lokhu kubukeka kanjani kupholile - futhi, uma ngibona izinselelo zikaYahoo zokuba nesu, angiqiniseki ukuthi le ndlela izuzisa kanjani.
Enhlanganweni enkulu njenge-IBM, enamakhulu ezinkulungwane zabasebenzi, mhlawumbe kungumbono omuhle ukubeka isiza lapho abantu bengatholana khona! Izinyosi zibonakala ziwumthombo omkhulu wabasebenzi wokukhomba nokuthola abanye abasebenzi.
Isiza seMicrosoft sibonakala sigxile kuzinsizakusebenza zabasebenzi baso kwimikhiqizo yabo kanye nezinsizakalo. Muva nje, noma kunjalo, iMicrosoft yethule I-Townsquare - isicelo senhlalo sokuxhumana kanye nokusebenzisana.
Awudingi ukuba yinkampani enkulu ukufaka amathuluzi wokusebenzisana kuzinqubo zakho zomsebenzi. Enkampanini yami, sifudukele ngokuphelele ku- Izinhlelo zokusebenza ze-Google futhi ngize ngayihlanganisa nayo Salesforce.
Tags: isu le-imeyili leminyaka emishalaura lippay
Ukubuyekezwa kweFirefox 3, amaRobhothi, ama-Add-ons namaTweaks
Jun 18, 2008 ku-11: 40 PM
Sawubona Doug, okuthunyelwe okusebenzisekayo - enkampanini yami sesithuthele naku-Google Apps. Isebenziseka kalula. Ngakho-ke ngezinhloso zengxoxo yangaphakathi nezinto ezinjalo kuhle kakhulu. I-calender nama-docs nawo alungele izinhloso zangaphakathi. Ngabona i-glitch encane nokho. Ukuba inkampani yabezindaba, sisebenza kumaphrojekthi amaningi futhi ngithola ukuthi angifuni abanye babasebenzi bami bathole imininingwane kuwo wonke amaphrojekthi wami. Sishintshele ku Ukudela futhi ngithola ukuthi ngaso sonke isikhathi ngizizwa sengathi ngilawula kakhudlwana. Futhi kunezinto zokwabelana ngaphakathi kwephrojekthi ngayinye ukuze ngikwazi ukwabelana ngamabhulogi namafayela njll - ukugcina izinto ezihlukaniswe ngaphakathi kwamaphrojekthi - futhi ama-analytics ayibhonasi eyengeziwe. into engekho kuhlelo lokusebenza ingxoxo kodwa-ke i-Google Apps ngaphezu kwalokho ekwenzela lokho. I-DA akuyona ukuphela kwethuluzi - i-theres Zoho ne-Wrike ne-Basecamp njll - kepha ngithola ukuthi i-Deskaway yayinengqondo - $ 10 - $ 25 - kuya ngezidingo ze-ur futhi nayo ine-interface ye-SUPER - uke wazama noma yimaphi amathuluzi anjalo?
THANDA IQINISO LOKUTHI UFAKWE AMAZWI WAMAVIDIYO 🙂
Sep 6, 2008 ku-11: 37 AM
Ngiyabonga Aditya, ngingumlandeli omkhulu weSeesmic!
Sep 5, 2008 ngo-12: 32 PM
okuthunyelwe okuhle. Uphuthelwe okukhuliswe ngokwemvelo, okwakhiwe ngabasebenzi ababili besebenzisa amapulatifomu womthombo ovulekile nokuthuthuka (i-drupal) futhi kuyisibonelo esihle sendlela yokulwa phezulu. I-Blueshirtnation.com, inethiwekhi yokuxhumana nabantu yangaphakathi kaBest Buy. UGary Koelling noSteve Bendt bangabadali. Ezinye izixhumanisi….
Kukhulunywa futhi ngabo encwadini kaCharlene Li ethi, "Groundswell".
Sep 6, 2008 ku-11: 28 AM
Ngiyabonga! Kuyajabulisa impela lapho abasebenzi bangempela bezithathela bona ukuqala inethiwekhi yokuxhumana nabantu. Ngizohlola.